Qaraxa Nashville: Booliska oo shaaciyay magaca qofka looga shakisanyahay qaraxa | Berberanews.com
Home WARARKA Qaraxa Nashville: Booliska oo shaaciyay magaca qofka looga shakisanyahay qaraxa
Qaraxa Nashville: Booliska oo shaaciyay magaca qofka looga shakisanyahay qaraxa
Booliska oo baaraya gaari xamuul ah oo saddex qof ku dhaawacay magaalada Nashville maalintii ciidda Masiixiga ayaa magacaabay qof laga shakisan yahay ka dib markii DNA lagu soo ururiyay goobta.
Saraakiisha gobolka Tennessee ee Mareykanka ayaa sheegay in DNA-da ay is yeesheen Anthony Quinn Warner oo 63 jir ah.
FBI-da ayaa sheegay in aysan jirin wax tilmaam ah oo ku saabsan tuhmanayaal dheeraad ah inkastoo ay tahay xilli hore in a ogaado haybta dambiileyaasha.
Qaraxa ka dhacay banaanka xafiiska isgaarsiinta ayaa carqaladeeyay nidaamyadii isgaarsiinta ee Tennessee iyo afar gobol oo kale.
Qaraxa ayaa dhaawacay seddex qof isla markaana carqaladeeyay nidaamyadii isgaarsiinta ee Tennessee iyo afar gobol oo kale.
Intii lagu guda jiray shirkii jaraa’id ee Axadii, baarayaasha federaalka waxay sheegeen inay rumeysan yihiin in Warner, oo ka shaqeynayay Technologiyadda, khibrad dheerna u lahaa qalabka elektarooniga, inuu ahaa shaqsiga kaliya ee mas’uulka ka ahaa qaraxa kaasi oo ku dhintay goobta.
Waxay sheegeen in qaraxa loo malaynayo inuu ahaa mid ula kac ah, haraaga goobta laga helayna uu Warner.
Sida laga soo xigtay diiwaanka dadweynaha, Warner ayaa ilaa goordhow deganaa Antioch, oo ah xaafad ka tirsan Nashville, halkaas oo ay booliisku Sabtidii baaritaan ku sameeyeen.
Deriska ayaa sidoo kale soo sheegay inay arkeen gaari xamuul ah oo goobta yaal, warbixinta maxaliga ah.
Mar sii horeysay, CBS News ayaa soo warisay in dheecaanka DNA laga qaaday Warner hooyadiis.
Wakiilka Gaarka ah ee FBI ee dacwadas Douglas Korneski ayaa goor sii horeysay sheegay in saraakiisha ay heleen ilaa 500 oo talooyin oo laga yaabo inay la xidhiidhaan qaraxa.
Maxaa ka dhacay Nashville?
The blast on 25 December disrupted communications systems in Tennessee and four other states
Saraakiisha ayaa ka jawaab celiyay warbixinnada rasaasta waxyar ka hor 06:00 waqtiga maxalliga ah (12:00 GMT) ee 25 Diseembar aagga qaraxu ka dhacay ayaa caan ku ah maqaayadaha iyo cawayska.
Wax yar kadib, waxay heleen gaari xero xero ah oo faafinaya fariin digniin ah inay ka baxaan aagga.
Gaariga ayaa qarxay daqiiqado yar ka dib, xooggii qaraxa ayaa sarkaal ka soo tuuray cagahooda, booliska ayaa sidaas yidhi.
Booliiska ayaa sii daayay muuqaalkan gaariga yar – oo ay booliska Nashville ku sifeeyeen in uu yahay gaari madadaalo (RV) – oo soo gaaraya goobta goor hore oo jimce ah.
Baabuurka ayaa ku qarxay bannaanka dhismaha ay leedahay shirkadda isgaarsiinta ee weyn ee AT&T, oo sidoo kale ku taal taawar xafiis oo u dhow.
Dhismayaasha waxaa soo gaadhay burbur dhismeed, daaqadaha ayaa la qarxiyay, geedona waa la jaray. Fiidiyowyo la soo dhigay baraha bulshada ayaa muujinayay biyo ka yimid dhuumaha waxyeelleeya ee darbiyada hoostooda maraya sida qaylo-dhaan ka soo yeeraya xagga dambe.
Nidaamyada degdegga ah ee booliiska ayaa laga jaray guud ahaan Tennessee.
Adeegyada taleefannada, internetka iyo fiber optic TV ayaa sidoo kale carqaladdaysmay magaalooyinka Tennessee, Mississippi, Kentucky, Alabama iyo Georgia, sida ay sheegtay shirkadda isgaadhsiinta ee AT&T.
Previous articleCiidammada Kenya oo laayay xubno Alshabaab ay ku sheegeen
Next articleBarta Afsoomaaliga Barta Q3’aad Ereyga HOOYO